Uchangamire hwaMwari—Nyaya Ichagumisa Kusaruramisira | Swedera Pedyo
1. Zviitiko zvokusaruramisira zvingatiita kuti tinzwe sei?
IMWE chirikadzi yakwegura inobirwa mari yayo yose yainayo. Kasvava kasina zvakanoziva kanosiyiwa nomubereki ane utsinye. Mumwe murume anoisirwa mujeri mhaka yaasina kupara. Unonzwa sei pamusoro pezviitiko izvi? Pamwe, zvose zvinokunetsa, uye zvinonzwisisika kuti ungadaro. Isu vanhu tine pfungwa yakasimba zvikuru yezvakanaka nezvakaipa. Panoitwa kusaruramisira, zvinotigumbura. Tinoda kuti anenge atadzirwa aripwe uye mutadzi atongwe. Kana izvi zvikasaitika, tinganetseka kuti: ‘Mwari ari kuona zviri kuitika here? Nei pasina zvaari kuita?’
2. Habhakuki akaita sei nokusaruramisira, uye nei Jehovha asina kumutsoropodza nokuda kweizvi?
2 Kubva kare nakare, vashumiri vakatendeka vaJehovha vave vachibvunza mibvunzo yakadai. Somuenzaniso muprofita Habhakuki akanyengetera kuna Mwari achiti: “Munondiratidzireiko zvakaipa, munotarireiko zvisakarurama? Nokuti kuparadza nokuita nesimba zviri pamberi pangu; rukave ruripo, uye kukakavara kunomuka?” (Habhakuki 1:3) Jehovha haana kutsoropodza Habhakuki nokuda kwokubvunza kwake nomwoyo wose, nokuti Ndiye akaisa muvanhu pfungwa iyoyo yeruramisiro. Hungu, Jehovha akatikomborera nokutipawo kachikamu kaduku kepfungwa yake yakadzama yeruramisiro.
Jehovha Anovenga Kusaruramisira
3. Nei zvichigona kutaurwa kuti Jehovha anoziva nezvokusaruramisira kutipfuura?
3 Jehovha anoziva kuti kune kusaruramisira. Anoona zviri kuitika. Pamusoro pezuva raNoa, Bhaibheri rinotiudza kuti: “Jehovha wakaona kuti kuipa kwavanhu kwakanga kuri kukuru panyika, nendangariro dzokufunga kwemwoyo yavo dzakanga dzakaipa bedzi nguva dzose.” (Genesi 6:5) Funga zvinorehwa nemashoko iwayo. Kazhinji, manzwisisire atinoita kusaruramisira anobva pazviitiko zvishomanana zvatingave takanzwa nezvazvo kana kuti zvatakasangana nazvo isu pachedu. Kusiyana neizvi, Jehovha anoziva nezvokusaruramisira kuri kuitwa munyika yose. Anozviona zvose! Kupfuura ipapo, anogona kuona kwakarerekera mwoyo—kufunga kwakaipa kuri seri kwezviito zvokusaruramisira.—Jeremia 17:10.
4, 5. (a) Bhaibheri rinoratidza sei kuti Jehovha ane hanya nevakabatwa nokusaruramisira? (b) Jehovha pachake akarwadziwa sei nokusaruramisira?
4 Asi Jehovha haangocherechedzi kusaruramisira chete. Ane hanya zvekare nevakabatwa nokusaruramisira. Vanhu vake pavakabatwa noutsinye nemarudzi aivavenga, Jehovha akarwadziwa “pamusoro pokugomba kwavo nokuda kwavaivamanikidza nokuvanetsa.” (Vatongi 2:18) Pamwe wakacherechedza kuti kana vamwe vanhu vakaramba vachiona kusaruramisira, havazombonyanyi kunzwira tsitsi vazviitirwa. Jehovha haana kudaro! Akaona kusaruramisira kwose kwemakore 6 000, asi haana kuchinja mavengere aanokuita. Asi, Bhaibheri rinotipikira kuti zvinhu zvakadai so“rurimi runoreva nhema,” “maoko anodurura ropa risina mhaka,” uye “chapupu chinonyengera chinoreva nhema” zvinhu zvinonyangadza kwaari.—Zvirevo 6:16-19.
5 Fungawo nezvokutsoropodza kwaJehovha zvakasimba vatungamiriri vasina ruramisiro munyika yeIsraeri. “Ko hamuzaifanira kuziva kururamisira vanhu here?” akafuridzira muprofita wake kuvabvunza. Pashure pokurondedzera zvakajeka kushandisa kwavo simba zvisizvo, Jehovha akafanotaura mugumo wevarume vaiita uori ava achiti: “Vachadana kuna Jehovha, asi haangavapinduri; zvirokwazvo uchavavanzira chiso chake nenguva iyo, nokuda kwezvakaipa zvavakaita pamabasa avo.” (Mika 3:1-4) Jehovha anovenga kusaruramisira chaizvo! Chokwadi, iye pachake akatonyatsozvionera kusaruramisira kwacho! Kwezviuru zvemakore, Satani ave achimushora zvisina ruramisiro. (Zvirevo 27:11) Uyezve, Jehovha akarwadziwa nechiito chikurusa chokusaruramisira apo Mwanakomana wake, uyo asina “kuita chivi,” akaurayiwa setsotsi. (1 Petro 2:22; Isaya 53:9) Sezviri pachena, hakusi kuti Jehovha haazivi kana kuti haana basa nenhamo yevari kutambura nokusaruramisira.
6. Tingaitei patinosangana nokusaruramisira uye nei?
6 Asi, patinoona kusaruramisira—kana kuti apo isu pachedu tinobatwa nokusaruramisira—zvinongouya zvoga kuti tinzwe hasha. Takaitwa nomufananidzo waMwari, uye kusaruramisira hakuwirirani zvachose naJehovha. (Genesi 1:27) Saka nei zvino Mwari achibvumira kusaruramisira?
Nhau Yokuva Changamire kwaMwari
7. Rondedzera kuti uchangamire hwaJehovha hwakadenhwa sei.
7 Mhinduro yomubvunzo uyu yakabatana nenhau youchangamire. Sezvataona, Musiki ane kodzero yokutonga panyika nevose vanogara pairi. (Pisarema 24:1; Zvakazarurwa 4:11) Zvisinei, kare munhau yevanhu, uchangamire hwaJehovha hwakadenhwa. Izvi zvakaitika sei? Jehovha akarayira munhu wokutanga, Adhamu, kuti asadya mumwe muti waiva mubindu iro raiva musha wake weParadhiso. Ko dai aisazoteerera? Mwari akamuudza kuti “uchafa zvirokwazvo.” (Genesi 2:17) Murayiro waMwari wakanga usingaomeseri Adhamu kana kuti mudzimai wake Evha. Kunyange zvakadaro, Satani akakwanisa kuita kuti Evha afunge kuti Mwari akanga achinyanya kudzvinyirira. Ko dai aizodya muti wacho? Satani akanyatsoudza Evha kuti: “Hamungafi zvirokwazvo. Nokuti Mwari anoziva kuti nomusi wamunozvidya nawo meso enyu achasvinudzwa mukava saMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.”—Genesi 3:1-5.
8. (a) Satani airevei nemashoko ake kuna Evha? (b) Satani akapokana nei pakuva changamire kwaMwari?
8 Mumashoko aya Satani akareva kuti Jehovha akanga asina kungorega kupa Evha mashoko anokosha chete, asiwo kuti Jehovha akanga amurevera nhema. Satani akangwarira kuti asapokane nepfungwa yokuva Changamire kwaMwari. Asi akaratidza kupokana nokururama, kukodzera uye kunaka kwazvo. Nemamwe mashoko, akaramba achiti Jehovha akanga asiri kushandisa uchangamire hwake nenzira yakarurama uye yakanakira vaaitonga.
9. (a) Kuna Adhamu naEvha, ndoupi wakava mugumisiro wokusateerera, uye izvi zvakamutsa mibvunzo ipi inokosha? (b) Nei Jehovha asina kungoparadza mhandu dzacho?
9 Pakupedzisira, Adhamu naEvha havana kuteerera Jehovha nokudya muti wakarambidzwa. Kusateerera kwavo kwakavaita kuti vakodzerwe nechirango chorufu, seizvo Mwari akanga arayira. Nhema dzaSatani dzakamutsa mibvunzo inokosha. Jehovha ane kodzero here zvechokwadi yokutonga vanhu, kana kuti munhu anofanira kuzvitonga? Jehovha anoshandisa uchangamire hwake nenzira yakanakisisa inobvira here? Jehovha aigona kudai akashandisa simba rake rose kuparadza vapanduki vacho pakarepo. Asi mibvunzo yakamutswa yakanga ine chokuita nokutonga kwaMwari, kwete simba rake. Saizvozvo kubvisa Adhamu, Evha, uye Satani kwaizodai kusina kuratidza kururama kwokutonga kwaMwari. Zvaigona kuzoitika ndezvokuti kutonga kwake kwaitozowedzera kupomerwa mhaka. Nzira bedzi yokuziva nayo kana vanhu vaizogona kuzvitonga nokubudirira, pasina Mwari, kwaiva kungobvumira nguva.
10. Nhau dzakaitika dzakaratidzei pamusoro pokutonga kwomunhu?
10 Ko kupfuura kwenguva kwaratidzei? Muzviuru zvemakore, vanhu vaedza marudzi akawanda ehurumende, kusanganisira dzinotongwa nomunhu mumwe, dzinosarudzwa nevanhu, dzegutsaruzhinji, nedzechikomonizimu. Dzose dzabatanidzwa dzinokodzera zvinotaurwa neBhaibheri zvakajeka kuti: “Munhu ane simba pamusoro pomumwe, achimuitira zvakaipa.” (Muparidzi 8:9) Nechikonzero chakanaka, muprofita Jeremia akataura kuti: “Ndinoziva kuti nzira yomunhu haisi yake amene; munhu, unofamba, haagoni kururamisa nhano dzake.”—Jeremia 10:23.
11. Nei Jehovha akarega vanhu vachipinda munhamo?
11 Jehovha aiziva kubva pakutanga kuti kuzvimiririra kwevanhu, kana kuti kuzvitonga, kwaizoguma nokutambura kukuru. Saka kwakanga kuri kusaruramisira kwake here kubvumira zvakanga zvisingadzivisiki kuitika? Kwete! Somuenzaniso: Ngatitii une mwana anofanira kuvhiyiwa nachiremba kuti arapwe chirwere chinogona kumuuraya. Unozviziva kuti kuvhiyiwa kwacho kuchatambudza mwana wako chaizvo, uye izvi zvinokurwadza chaizvo. Panguva imwe chete, unoziva kuti zvinenge zvaitwa zvichagonesa mwana wako kuzova noutano huri nani muupenyu. Saizvozvowo, Mwari aiziva—uye akatofanotaura—kuti kubvumira kwake kutonga kwevanhu kwaizouya pamwe nemarwadzo nokutambura. (Genesi 3:16-19) Asi aizivawo kuti ruyamuro chairwo rwaizogara rwaizongobvira bedzi kudai aizobvumira vanhu vose kuona zvibereko zvakaipa zvokupandukira. Nenzira iyi nhau yacho yaizogadziriswa zvachose, nokusingaperi.
Nhau Yokuvimbika Kwomunhu
12. Sezvinoratidzwa nezvakaitika kuna Jobho, Satani akapomerei vanhu?
12 Nhau iyi ine rumwe rutivi. Mukudenha kukodzera nokururama kwokutonga kwaMwari, Satani haana kungochera Jehovha chete maererano nouchangamire Hwake; akacherawo vashumiri vaMwari pakuvimbika kwavo. Ona somuenzaniso, zvakataurwa naSatani kuna Jehovha pamusoro pomurume akarurama Jobho: “Hamuna kumupoteredza here norumhanda, iye neimba yake, nezvose zvaanazvo, pamativi ose? Makaropafadza mabasa amaoko ake, uye fuma yake yakawanda panyika. Asi tambanudzai henyu ruoko rwenyu zvino, murove zvose zvaanazvo, ipapo iye uchakushorai pachena.”—Jobho 1:10, 11.
13. Satani airevei nokupomera kwake Jobho, uye izvi zvinobatanidza vanhu vose sei?
13 Satani akapomera Jehovha kuti akanga ari kushandisa simba Rake rokudzivirira kutenga kuzvipira kwaJobho. Izvi zvaizoreva kuti kuvimbika kwaJobho kwaingova unyengeri chete, kuti ainamata Mwari nokuda kwezvaaigona kuzowana. Satani akaramba achiti kudai Jobho aizorega kupiwa chikomborero chaMwari, kunyange murume iyeye aizotuka Musiki wake. Satani aiziva kuti Jobho aiva nomuenzaniso wakanaka pakuva munhu “wakakwana, wakarurama, unotya Mwari, achinzvenga zvakaipa.” * Naizvozvo kudai Satani aigona kuputsa kuvimbika kwaJobho, izvozvo zvaizorevei kune vamwe vanhu vose? Nokudaro Satani chaizvo akanga achiratidza kusava nechokwadi nokuvimbika kwavose vanoda kushumira Mwari. Chokwadi, achiwedzera nhau yacho, Satani akati kuna Jehovha: “Zvose zvaanazvo munhu [kwete Jobho chete] angazviisira upenyu hwake.”—Jobho 1:8; 2:4.
14. Nhau dzakaitika dzakaratidzei pamusoro pokupomera vanhu kwaSatani?
14 Nhau dzakaitika dzakaratidza kuti vazhinji, kufanana naJobho, vakaramba vakavimbika kuna Jehovha mukutarisana nomuedzo—kupesana nezvakataurwa naSatani. Vakaita kuti mwoyo waJehovha ufare noupenyu hwavo hwokutendeka, uye izvi zvakapa Jehovha mhinduro yokutaura kwaSatani kwokuzvikudza achiti vanhu vacharega kushumira Mwari kana vaomerwa. (VaHebheru 11:4-38) Hungu, vanhu vane mwoyo yakarurama havana kusiya Mwari. Kunyange pakutambudzwa nemamiriro ezvinhu anoodza mwoyo zvakanyanyisa, vakatowedzera kuvimba naJehovha kuti avape simba rokutsungirira.—2 VaKorinde 4:7-10.
15. Mubvunzo upi ungamuka pamusoro pokutonga kwaMwari kwekare nokwomunguva yemberi?
15 Asi kushandisa kwaJehovha ruramisiro hakungobatanidzi nhau youchangamire chete nokuvimbika kwomunhu. Bhaibheri rinotipa nhoroondo yokutonga kwaJehovha vanhu uye kunyange marudzi ose. Rinewo uprofita hwemitongo yaachapa munguva yemberi. Nei tichigona kuva nechivimbo chokuti Jehovha ave akarurama uye achadaro mukutonga kwake?
Chikonzero Nei Ruramisiro yaMwari Yakakwirira
Jehovha ‘haazomboparadzi vakarurama pamwe chete nevakaipa’
16, 17. Mienzaniso ipi inoratidza kuti vanhu vane maonero asina kukwana pamusoro peruramisiro yechokwadi?
16 NezvaJehovha, zvinogona kutaurwa zvechokwadi kuti: “Nzira dzake dzose dzakarurama.” (Dheuteronomio 32:4) Hapana chero mumwe wedu anogona kuzvitaura achidaro, nokuti kazhinji maonero edu asina kukwana anodzikatidza kunzwisisa kwedu zvakarurama. Somuenzaniso, funga nezvaAbrahamu. Akateterera kuna Jehovha nezvokuparadzwa kweSodhomu—pasinei nouipi hwakanga hwakazaramo. Akabvunza Jehovha kuti: “Muchaparadza vakarurama pamwe chete navakaipa here?” (Genesi 18:23-33) Zvechokwadi, mhinduro yakanga iri yokuti kwete. Jehovha akazotanga ‘kunayisa pamusoro peSodhomu neGomora sarufa nomoto’ Roti nevanasikana vake vasvika zvakanaka kuguta reZoari. (Genesi 19:22-24) Kusiyana neizvi, Jona “akatsamwa kwazvo” apo Mwari akaratidza ngoni kuvanhu veNinivhi. Sezvo Jona akanga atozivisa nezvokuparadzwa kwavo, aizodai akagutsikana nokuvaona vachiparadzwa—pasinei nokupfidza kwavo nomwoyo wose.—Jona 3:10–4:1.
17 Jehovha akapikira Abrahamu kuti kushandisa Kwake ruramisiro hakungosanganisiri kuparadza vanhu vakaipa asi kuponesawo vakarurama. Ukuwo Jona akatodzidza kuti Jehovha ane ngoni. Kana vakaipa vakachinja nzira dzavo, “akagadzirira kukanganwira.” (Pisarema 86:5, NW) Kusiyana nevamwe vanhu vanotyira nzvimbo dzavo, Jehovha haapi mutongo wakakomba kungoti aratidze simba rake, uyewo haaregi kuratidza ngoni achityira kuti anozoonekwa seasina simba. Maitiro ake ndeokuratidza ngoni chero bedzi pane zvikonzero zvokudaro.—Isaya 55:7; Ezekieri 18:23.
18. Ratidza kubva muBhaibheri kuti Jehovha haangoiti zvinhu nokungonzwira tsitsi.
18 Zvisinei, Jehovha haapofumadzwi nokunzwira tsitsi. Vanhu vake pavakanyura mukunamata zvidhori, Jehovha akazivisa zvakasimba kuti: “Ndichakutonga zvakafanira nzira dzako; ndichauyisa pamusoro pako zvinonyangadza zvako zvose. Ziso rangu haringakupembedzi, handingavi netsitsiwo; asi ndichauyisa nzira dzako pamusoro pako.” (Ezekieri 7:3, 4) Naizvozvo kana vanhu vaomerera panzira yavo, Jehovha anotonga zvinoenderana. Asi kutonga kwake kunobva pauchapupu hwakasimba. Nokudaro, apo “kudanidzira” kukuru kwazvo pamusoro peSodhomu neGomora kwakasvika munzeve dzake, Jehovha akati: “Ndichaburuka zvino kuti ndione izvo zvavaita, kana zvakafanana nokudanidzira kwavo kwakasvika kwandiri.” (Genesi 18:20, 21) Tinoonga sei kuti Jehovha haana kufanana nevanhu vazhinji vanokurumidza kugumisa vasati vanzwa uchapupu hwose! Chokwadi, Jehovha akaita sokurondedzerwa kwaanoitwa neBhaibheri, “ndiye Mwari wakatendeka, usinganyengeri.”—Dheuteronomio 32:4.
Iva Nechivimbo Mururamisiro yaJehovha
19. Tingaitei kana tine mibvunzo inotinetsa pamusoro pokushandisa ruramisiro kwaJehovha?
19 Bhaibheri haripinduri mibvunzo yose pamusoro pezvakaitwa naJehovha kare; uyewo haripi mashoko ose pamusoro penzira iyo Jehovha achatonga nayo vanhu nemapoka munguva yemberi. Apo tinovhiringidzwa nenhoroondo kana kuti uprofita huri muBhaibheri zvisina mashoko akakwana akadaro, tinogona kuratidza kuvimbika sezvakaita muprofita Mika, uyo akanyora kuti: “Ndichamirira Mwari woruponeso rwangu.”—Mika 7:7.
20, 21. Nei tichigona kuva nechivimbo chokuti Jehovha nguva dzose achaita zvakarurama?
20 Tinogona kuva nechivimbo chokuti mumamiriro ezvinhu ose, Jehovha achaita zvakarurama. Kunyange apo kusaruramisira kunoratidza sokuri kungosiyiwa kwakadaro nevanhu, Jehovha anopikira kuti: “Kutsiva ndekwangu; ndichatsividza.” (VaRoma 12:19) Kana tikamirira hedu, tichadzokororawo mashoko omuapostora Pauro anoratidza kuva nechokwadi anoti: “Mwari haana kururamisira here? Izvozvo ngazvirege kumbova zvakadaro!”—VaRoma 9:14.
21 Panguva ino, tiri kurarama mu“nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo.” (2 Timoti 3:1) Kusaruramisira no“kumanikidzwa” zvakaguma netsika zhinji dzakashata dzoutsinye. (Muparidzi 4:1) Zvisinei, Jehovha haana kuchinja. Achiri kuvenga kusaruramisira, uye ane hanya zvikuru neavo vanokuitirwa. Kana tikaramba takavimbika kuna Jehovha nouchangamire hwake, achatipa simba rokutsungirira kusvika nguva yakagadzwa apo acharuramisa kusaruramisira kwose mukutonga kwoUmambo hwake.—1 Petro 5:6, 7.
^ ndima 13 Jehovha akati nezvaJobho: “Hakuna munhu wakafanana naye panyika.” (Jobho 1:8) Saka, pamwe Jobho akararama Josefa afa uye Mosesi asati ava mutungamiriri wevaIsraeri akagadzwa. Nokudaro, panguva iyoyo zvaigona kunzi hapana munhu aiva nokuvimbika sokwaJobho.
Dheuteronomio 10:17-19 Nei tichigona kuva nechivimbo chokuti Jehovha haasaruri mukubata kwake?
Jobho 34:1-12 Paunenge watarisana nokusaruramisira, mashoko aErihu angasimbisa sei chivimbo chako mukururama kwaMwari?
Pisarema 1:1-6 Nei zvichikurudzira kuziva kuti Jehovha anonyatsopepeta zviito zvevakarurama nevakaipa?
Maraki 2:13-16 Jehovha akanzwa sei nokusaruramisira kwakaitwa vakadzi vakarambwa nevarume vavo pasina zvikonzero kwazvo?
Kuti tipindure mubvunzo uyu, ngatimboongororai muchidimbu kurangwa kuviri kwakaitwa vanhu naMwari kuri muBhaibheri, kureva Mafashamo emunguva yaNoa uye kuparadzwa kwevaKenani.